ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့် မြဝတီမြို့၌ ထိုင်းဆန်များ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်း မရှိတော့ - Yangon Media Group
ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့် မြဝတီမြို့၌ ထိုင်းဆန်များ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်း မရှိတော့
မြဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီ မြို့တွင်း မြန်မာဆန်နှင့် ထိုင်းဆန်များ ရောင်းချလျက်ရှိသော်လည်း ယခုအခါ ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးနှုန်း မြင့်တက်နေသောကြောင့် မြဝတီ မြို့မှ ဆန်ဆိုင်များ ထိုင်းဆန်များ အားဝယ်ယူရောင်းချခြင်း မရှိတော့ ကြောင်းသိရသည်။
”မြဝတီမြို့မှာ အရင်က ထိုင်းဆန်တွေကို ရောင်းချပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဆန်ဆိုင်တွေကမတင် ကြတော့ဘူး၊ ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ ထိုင်းဆန် တွေ ဈေးမြင့်တက်လာတယ်၊ မဲ ဆောက်မှာဆိုရင် မြန်မာတွေများ တော့ မြန်မာဆန်တွေကို မဲဆောက်ကို ပို့ကြတယ်၊ မြန်မာတွေက မြန်မာ ဆန်ကိုပိုကြိုက်ကြတယ်၊ ထိုင်းဆန်က ဆန်ပျော့ကို ထိုင်းလို ‘ခေါက်မလိ’လို့ခေါ်တယ်၊ ဆန်မာကို ‘ခေါက်မကျိုက်’လို့ခေါ်တယ်။ အရည်သွေးလည်း ကောင်းတယ်၊ ဖွဲနဲ့ဆန်ကွဲလုံးဝမပါဘူး၊ တစ်တောင့်ချင်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်မီဆန်စက်တွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖွတ်ထားတော့ အာဟာရမရှိတော့ဘူး”ဟု ဂျူးဂျူးဆန်ဆိုင်မှ ကိုခင်ဇော်ကပြောကြားသည်။
ယခုအခါ မြဝတီမြို့မှ ဆန်ဆိုင်အချို့သည် ထိုင်းဆန်ကို ဆိုင်တင်ရောင်းချနေသော်လည်း ဝယ်စားမည့်သူမရှိသောကြောင့် မတင် တော့ဘဲ မြန်မာဆန်ကိုသာ ရောင်းချနေပြီး မဲဆောက်ဘက်ရှိ မြန်မာဆိုင်များတွင် မြန်မာဆန်ရောင်းချ နေသလို မြန်မာဆန်ကို ထိုင်းလူမျိုးများကပါဝယ်ယူစားသုံးကြသည်။ မြဝတီမြို့ရှိ ဆန်အရောင်းဆိုင်အချို့တွင် ရန်ကုန်နှင့်ရွှေဘိုမှ မှာယူသော ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း ၂၄ပြည်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၄၉ဝဝဝ၊ ဖျာပုံပေါ်ဆန်း ၂၄ပြည် တစ်အိတ်လျှင်ကျပ် ၃၃ဝဝဝ၊ သထုံပေါ်ဆန်း ၂၄ ပြည်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၂၈၅ဝဝ၊ ဇီယာ(ခေါ်) ဧည့်မထ ၂၄ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ်၂၂၇ဝဝ ဈေးနှုန်းအသီးသီးဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိ သည်။
မြဝတီမြို့၌ တရားမဝင် ဂိမ်းဆိုင်များကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ဂိမ်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ဖမ်းဆီးရမ??
မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်ကြီးဘဒ္ဒန္တသုဇန၏ အန္တိမအဂ္ဂိဈာပန သာဓုကီဠနပူဇာပွဲနှင့် တပည့်များ၏ ပစ္ဆိမဝ?
နည်းပြမော်ရင်ဟိုအား စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် မန်ယူအသင်းပြင်ဆင်နေ
ဆော်ဒီ အာရေဗီးယား အိမ်ရှေ့မင်းသား G-20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်